Global TA & HR – Attendance, Payroll & HR Management Solution in Myanmar
Attendance, Payroll & HR Management Solution
၀န်ထမ်းများ အလုပ်မှာ တက်ကြွပျော်ရွှင်စေပြီး
စီမံခန့်ခွဲသူများ အလုပ်ကို မြန်ဆန် ထိရောက်စွာ ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့
Global TA&HR ဆိုတာဘာလဲ?
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ သာမက Enterprise လုပ်ငန်းများအထိ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mobile First Cloud based HR Management Solution ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ``Recuirement`` to ``Retire`` လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး စီမံခန့်ခွဲ နိုင်မယ့် Application ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ တက်ကြွပျော်ရွှင်စေပြီး လုပ်ငန်းရှင်နှင့် မန်နေဂျာများ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြန်ဆန် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ် ရေးဆွဲထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆီမှယုံကြည်မှုကိုရရှိစေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ?
Application ကို ခေတ်နှင့် အညီ စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်မြင့်တင်ကာ
အမှန်တကယ် အသုံးချနိုင်သည့်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးသော ထိရောက်သည့် ဝန်ဆောင်မူများကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အများစုမှ Global TA&HR Solutions များကို အသုံးပြုနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Global TA&HR Application တွင် Employee Information, Attendance, Payroll နှင့် HR ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြန်ဆန် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေမည့် features များပါဝင်ပါသည်။ ``Recruitment`` to ``Retire`` လုပ်ငန်းဆောင်တာ အားလုံးအတွက် ခေတ်နှင့်အညီ အထူးပြုရေးဆွဲထားသော features များပါဝင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီရဲ့ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်ကို အချက်အလက် စုံလင်စွာ Digitalize ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး Mobile, Web ပေါ်မှတဆင့် ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အချက်အလက်ကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Attendance, Payroll and HR တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Information Checking, Request & Approve တို့ကို မန်နေဂျာ၊ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးစီချင်းအလိုက် မိမိကိုယ်တိုင် Mobile Phone များမှ တဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ဝင်/ထွက် အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီး Attendance, Late, Early Out, Absent, OT စသည်တို့ကို တိကျ မှန်ကန်စွာ အချိန်တိုအတွင်း တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ Attendance Policy တွေကို စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဉပဒေအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Leave Policy များ အသင့် အသုံးပြုနိုင်သလို စိတ်ကြိုက် Leave Policy များကို ဘယ်လောက်ပဲ ရှုပ်ထွေးပါစေ အလွယ်တကူ သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်ရက် အရေအတွက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Reports များစွာကိုလဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Attendance Data များပေါ်မူတည်ပြီး Payroll Rule များ သတ်မှတ်လို့ ရသလို Addtion/Deduction Policy များကိုလဲ လွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီပြီးသား Tax & SSB Rules တွေကိုလည်း အဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Review & Appraisal Module ကို အခြေခံသတ်မှတ်ချက် Criteria များစွာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းတွေ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကို မန်နေဂျာမှ Cloud base Application / Mobile Phone ဖြင့် အလွယ်တကူ အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။